Piedmont (Italy), isithombe eyashayisa ubuhle bemvelo ukubukwa umbukwane, ungathola umsebenzi nobuhle kokubili ebusika kanye nasehlobo. Lokhu ehlukile esifundeni Italy has konke okudingayo for a holiday ezinhle: ilanga, izintaba, iwayini amahle cuisine, nemvelo omangalisayo nemizana ebukekayo ubudala. Yingakho Piedmont isiba yindawo kuthandwa izivakashi ngubani dream ukuhlanganisa izinhlobo ezahlukene ukuzilibazisa kwelinye round.
Igama ngokwalo kusikisela ukuthi Piedmont, lapho iyisifundazwe - ". Esinqeni ezintabeni" Ngempela, esifundeni ezinhlangothini ezintathu ozungezwe izintaba - ezintabeni zase-Alps Ligurian Apennines. Iphuzu esiphezulu kule ndawo - Mount Monviso (3841 m). Isifundazwe senzeka enyakatho-ntshonalanga yezwe futhi elisemngceleni izifunda ezifana waseLombardy Liguria, Valle d'Aosta, kanye namazwe France ne-Switzerland. Endaweni Piedmont - kuka 25 ayizinkulungwane square metres kancane. km, kuba yesibili ngobukhulu phakathi izifundazwe Italy. Relief endaweni enezintaba, nge izigodi kahle kuphenduke navundile nezintaba eziphakeme. Lapha kuvela nomfula omude kunayo yonke e-Italy - the Po, njengoba lesi sifunda nokuceba enhle, ecacile amachibi entabeni. Umuzi omkhulu esifundazweni Piedmont (Italy) - eTurin.
Piedmont (Italy), etholakala esishintshashintshayo ezimbili zezulu: ezintabeni - kuba ngokulinganisela sezintaba, isimo sezulu alpine, futhi emathafeni - ngokulinganisela ezwekazini. On the plain lide kakhulu futhi ehlobo kushisa nge kwezulu kancane, ke iqala ngo-May uphela ngasekupheleni September. Lezi izimo zezulu mahle yokutshala eliphezulu amagilebhisi. Winter iza Novemba futhi kuthathe izinyanga 2.5, it libhekene imvula eliphezulu, ikakhulukazi maqondana ezintabeni. Amazinga isilinganiso lesi sikhathi sonyaka lokususa 2 degrees. Spring (Mashi - ekucaleni May) kanye autumn (ngasekupheleni kuka September - maphakathi no-November) zinezikhathi izimo mnene futhi imvula isilinganiso.
History of the esifundeni
Eyokuqala documentary Ukhulumé esifundeni Piedmont (Italy) basonta ngekhulu le-13. Ngalezo zinsuku, kwakukhona fiefdoms eziningi ezincane, kwakungekho uhulumeni owodwa namasiko. Kwaze kwaba sekhulwini le-15, la mazwe beniyingxenye Duchy of Savoy. Ngekhulu le-18, Piedmont yaba isisekelo sezinguqulo United Sardinian, okuyinto yaba inhloko-dolobha eTurin. Ngasekuqaleni kwekhulu le-19, kuyilapho esifundeni ilawulwa France. Kodwa 1820 uthola ukuzimela futhi abe omunye izifunda amaningi asethuthukile nonenqubekelaphambili Italy. It is izakhamuzi zendawo ezinazo babé main ukushayela force e linemibhikisho eziningana Italian. Kuyinto emhlabeni Piedmont (uMbuso Sardinia) isifika ubunye Italy e ubuqotho lizwe ngo-1860.
Piedmont (Italy), kuhlanganisa 8 izifunda: Asti, eSifundazweni Verbano-Kusio-Ossola, Biella, Vercelli, Novara, Alexandria, eTurin, Cuneo. Capital Region - eTurin. It ihlobene evuthiwe ezokuthutha uxhumano zonke izindawo eziyimijondolo esifundeni, kanye emadolobheni amakhulu esifundeni: Milan, Piacenza, Savona, Aosta. Ohlukile Piedmont wukuthi lapha izimo ekahle izinhlobo ezahlukene lokuzilibazisa. Ebusika, zikhona ezinye zezindawo ezingcono kakhulu kuleli zwe ski resort futhi ehlobo ungakhululeka bese ngcono impilo yami Spas, kanye unyaka wonke, ungakwazi ukujabulela ukudla, iwayini, ubungcweti lasendulo futhi ukubukwa okukhulu.
Uma kukhona izifunda, ezembula ngokugcwele zonke charm yezwe, omunye wabo, ngokuqinisekile, Piedmont (Italy). Izikhangibavakashi sifundazwe zihlukene futhi eyingqayizivele. inhlokodolobha Isifunda sika - manje Baroque umbuso. Kukhona eziningi ezikhangayo Uyakufanelekela, abaluleke kakhulu zazo - San Carlo Piazza amathempeli ezimbili ezinhle kakhulu futhi isithombe sethusi. ETurin futhi ngempela kuwufanele bebona bobukhosi iBasilica di Superga, Citadel, Alfieri Theatre, Palace of the Academy of Science ngokuphathelene, le Palazzo iMadama, ibhuloho Victor Emmanuel Okokuqala.
Edolobheni eziningi ezindaweni ezithakazelisayo futhi izakhiwo, ngakho-ke kufanele uthathe okungenani izinsuku ezimbalwa. Piedmont Kuyaphawuleka ukuthi lapha kuyo yonke imizi aye wasigcina nomkhathi wawo ahlukile, futhi ngalinye linomsebenzi ezikhangayo lalo. Isenzakalo esidume kunazo zonke lezi Palazzo Alfieri Asti, Grillano izingidi, Racconigi futhi Tagliolo, esontweni iSan Secondo, futhi Sacro Monte St Francisco Villa Crespi, Palace of the isigodi. Inhloko-dolobha ye esifundeni ngasinye kuyinto eziyinkimbinkimbi esiyingqayizivele zomlando nge amazing isimo esizolile futhi umoya ezikhethekile. Ngakho-ke, ungakwazi nje kancane Piedmont ukuhamba, futhi isikhathi eside kakhulu.
ETurin - umuzi omkhulu (Piedmont, Italy), okuyinto akufanele kuphela uhlole i uhambo, kubalulekile kakhulu + ukuba ahambe kancane ukuba kudlule umphefumulo wakhe futhi uhlamvu. Eyesibili indawo ebalulekile esifundeni yidolobha eliyingqayizivele Asti, uye walondoloza izikhundla Ensemble yezakhiwo Ephakathi. Piedmont loke nje lidume ngokuthunga nasemizaneni yalo, 11 babo afakwe ohlwini lamalokishi enhle kakhulu yasemakhaya e-Europe. Lena emzaneni esiyingqayizivele esiqhingini Orta San Giulio, uhlala, Dzharessio nabanye. Futhi kuwufanele bebona wineries bendabuko, namachibi amahle, ezifana noMarjorie. Isifunda has amapaki ezingaphezu kuka-50 kazwelonke, kufanele ubone okungenani enhle kunazo Mont Avic kanye Gran Paradiso.
Piedmont - yindawo lapho kukhona njalo okuthile ukubungaza ngokwakho. izivakashi eziningi ngokukhethekile eze lapha ukuze uzame iwayini odumile Piedmont (Italy). Kunezinhlobo ezingaphezu kuka-40 izifunda iwayini ezikhiqiza, lapho kuwo ngamunye kukhona Distilleries eziningana ezenza iwayini ezahlukene. Ukuze ufunde ukubaqonda, kubonakala, akusikho ukuphila ngokwanele. Kodwa ungakwazi ukuhlela uhambo iwayini amaviki ambalwa uma ungenawo abe uchwepheshe, okungenani ngokulinganisela umuntu onolwazi kule ndaba. Futhi ungakwazi nje jabula ukunambitha izinhlobo ezahlukene, futhi ujabulele ukubukwa. Ngaphezu kwalokho, Piedmont iyindawo abadumile lapho truffle emangalisayo ikhule. Ngenkathi yokuqoqa lapha edonsela ochwepheshe abavela emhlabeni jikelele. Futhi, esifundeni idume hazelnuts yayo kanye ushokoledi futhi, yebo, ubuhle cuisine Italy.
Phakathi ukudla Piedmont ukuvakashela ngamachibi adumile, ozokusiza ukubuyisela ukugaya ngemva emadilini esindayo, kanye ukwelapha ezinye izifo futhi rejuvenate umzimba. Ebusika, ski Piedmont kufika umbuso, kukhona imizila esihle wonke amazinga abasubathi. Hhayi lutho eTurin isingathwe Winter Olympic.
Piedmont ngezinye izikhathi ibizwa ngokuthi i-Tuscany ngaphandle izivakashi, nakuba inani labo ezikhulayo minyaka yonke. Kodwa ngenkathi intengo yokuhlala uyathethelela ezingaphezu kuka esincintisana owaziwa. Abavakashi uphiwa isizinda esikhulu ehhotela emazingeni ahlukene, njalo ukudla okukhulu futhi service enhle. abantu wasePiedmont akuzona wusizo, kodwa ngaso sonke isikhathi ukwamukela izivakashi zayo. ukufika esifundeni Kalula. ETurin, usebenza isikhumulo sezindiza zamazwe ngamazwe, futhi lapha nje ukusuka Milan. AmaRashiya badinga Schengen visa, futhi lokho ukunikeza amaNtaliyane nge nezidingo eziza kuqala.
Piedmont (Italy), ukubuyekezwa zazo zihlala egcwele epithets nomdlandla, ezikhangayo asemkhathini yayo, woza lapha, ngokuba ithongo wangempela e-Italy, okuyinto namanje akwaziwa ukuthi bangempela futhi acwebile. inkathi eNkulu esifundeni - kusebusika, ngakho ihlobo izivakashi kakhulu esingaphansi ezifundazweni Italian bagqugquzela. Ngakho-ke, amanani ikhange nakakhulu, futhi ukuphila ukhululekile okuningi. Izivakashi belulekwa zingahambelani eTurin futhi uvakashele amanye amadolobha for 1-2 izinsuku Izipesheli iwayini abathandi onentshisekelo sezinsuku ezingu-3 izinkambo wineries.
Lezi amabhishi - amahle kakhulu emhlabeni
Lake Chokrakskoe (eCrimea) ayekuyo, kanjani lapho? Mud Lake Chokrak
Aphumule Andreyevka: Izibuyekezo
Hagia Sophia itholakala Istanbul
Kuyini olwandle Marmaris - aseMediterranean noma Aegean? Marmaris - ekubumbaneni wezilwandle ezimbili. Amaholide e Marmaris
Kozelsk, Kaluga esifundeni: nokuzwa nesithombe
Bandana ebusweni, ikhanda, isihlakala - nokuthi ukukhetha ukuthi yini okufanele uyigqoke?
Uchungechunge osemusha "Ubutha ': izindima abadlali
OLED-TV - kuyini? OLED-TV: amanani ukubuyekeza
Amaqiniso ngomuthi: isifo sikaBarrett
Guys Red: Ubumnene kanye nezimfanelo ezakhayo
Tom Riddle: indima villain, kanye abadlali abenza ke
Izimpawu, ukwelashwa kanye nokuvimbela ukucindezeleka ukuyaluza. nokugula ngengqondo